Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘चीनले ताइवानप्रति सम्मान देखाउनुपर्छ’ – Emountain TV
एजेन्सी, १ माघ । ताइवानकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति साइ यिंग वुनले चीनले ताइवानप्रति सम्मान दर्शाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि बहुमतले निर्वाचित भएकी ताइवानी राष्ट्रपति साइले उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले ताइवानको सार्वभौमसत्ताबारे कुनै शंका नरहेको र त्यसबारे वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
चीनले लामो समयदेखि ताइवानमाथि आफ्नो सार्वभौमसत्ता दाबी गर्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर भए पनि त्यो अधिकार लिने बताउँदै आएकोे छ । साइले आफ्नो जितबाट “एक चीन“ नीतिप्रति ताइवानी जनताको समर्थन नरहेको स्पष्ट हुने दावी गरिन् ।
चीनले अतिक्रमण गर्न खोजे त्यसको ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने राष्ट्रपति साइको भनाइ छ । गत शनिबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा साइले ५७ प्रतिशत अर्थात ८२ लाख मत पाएकी थिइन् । चीनको समर्थन रहेको उनका प्रतिष्पर्धी हान किओ यूले ३९ प्रतिशत मत पाएका थिए ।